I-Sickos kwi-Sofa: Umthetho kunye ne-Order: I-SVU's Iminyaka eli-13 yokuZisa ulwaphulo-mthetho ngokwesondo kwiXesha eliyiNtloko - Itv
Eyona Itv I-Sickos kwi-Sofa: Umthetho kunye ne-Order: I-SVU's Iminyaka eli-13 yokuZisa ulwaphulo-mthetho ngokwesondo kwiXesha eliyiNtloko
UMariska Hargitay njengoDet. UOlivia Benson woMthetho kunye noMyalelo: I-SVU (NBC)
Ndabona nje UAnnie , kwaye andijonganga uTata kaWarbucks ngendlela endiya kuba nayo kwiminyaka engama-20 eyadlulayo, uWarren Leight uxelele Umqwalaseli waseNew York ngefowuni kwiveki ephelileyo. Umboniso uyisongele ngokwenene indlela esijonga ngayo kwihlabathi, ubuncinci abo bethu bayibhalayo.
Umboniso wokuma kokugqibela kukaDick Wolf Umthetho kunye noMyalelo inkqubo, Icandelo elikhethekileyo lamaxhoba , wayetsala nzima ukuqonda indlela abantu ababukela ngayo iiseshoni zemarathon zomboniso awulawulayo. Iziqendu zabantwana ziyaphazamisa, nakuthi, utshilo uMnu Leight.
Ukhethe enye yezi ziqendu, enesihloko esithi Friending Emily, apho abacuphi baya kwiofisi ye-FBI ukujonga imifanekiso yabantwana abaphethwe gadalala. Umnumzana Leight uvakala ukuba wothukile, udiniwe kwaye woyikiswa kancinci yinkcukacha athe yena nababhali bakhe bakhetha ukuzibeka kwisiqendu. Wayevakala kakhulu, enyanisweni, njengophambili we-SVU, u-Elliot Stabler.
Kukho umntwana kwii-diapers iifoto esizibonisayo, utshilo uMnu Leight. Sifumene kwi-intanethi ye-intanethi. Kwakuneentsimbi ezingama-37,000 kwiintsuku ezine ezidlulileyo. (Yeyiphi, efumanekayo, ngowona mgca uthi ngqo igosa likarhulumente ngexesha lesiqendu.)
Ndiyathetha, iqela lethu kubasebenzi bokubhala linabantwana, utshilo. Akukho mntu ufuna ukubhala le nto. Iyadambisa.
Umboniso unokuphazamisa ababhali bawo, kodwa Umthetho kunye noMyalelo: SVU ukhe wazigqitha zonke ezinye iinkqubo ezenziwe nguDick Wolf. Sele kuyiminyaka emibini okoko i-NBC yaxuba eyokuqala Umthetho kunye noMyalelo , emva kwamaxesha angama-20. Kwanasemva kokurhoxiswa kwezinto ezimbini ezikhuthaziweyo, Umthetho kunye noMyalelo: Iinjongo zolwaphulo-mthetho kwaye Umthetho kunye noMyalelo: Los Angeles (Ungasathethi ke ngesiphelo esibi sesine esibizwa ngokuba si-spin Umthetho kunye noMyalelo: Uvavanyo lweJury ), SVU isaqhubeka ngamandla.
Yenye into yokuthi ubundlobongela buyathengisa. Ngenye into yokuba uhlaselo olubi ngokwesondo kumalungu oluntu asemngciphekweni, abantwana, banokwenza amandla kumdlalo oseleyo kwi-franchise engaqhelekanga ephumeleleyo. Kwanaxesha lokugqibela, xa amanqaku alo ayephantsi, SVU ibingowesithandathu umboniso obukelwe kakhulu kwi-NBC, ngaphambili ILiwa , IOfisi nayo yonke enye into kulayini wangoLwesine ebusuku. Kwincopho yayo, SVU ukwazile ukubhukuqa eyokuqala Umthetho kunye noMyalelo xa babesemoyeni kunye.
Yintoni ecacileyo: abantu bayathanda ukubukela Icandelo elikhethekileyo lamaxhoba , ngakumbi abasetyhini noomama abancinci. Ngapha koko, okoko umboniso wasungulwa kwiminyaka eli-13 eyadlulayo, abantu ababhinqileyo abaneminyaka eli-18 ukuya kwengama-34 ngabona babukeli bangatshintshiyo. Ababini kwisithathu sabaphulaphuli bethu ngabasetyhini, utshilo uMnu Leight. Ngokunyanisekileyo andiyiqondi ukuba kutheni, ngokupheleleyo. Andiyifumani xa abazali besithi babukele umboniso nabantwana babo, nokuba.
ULisa Friel, igqwetha elichithe phantse iminyaka engama-30 lijongana nokutshutshiswa kolwaphulo-mthetho ngokwesondo kwiofisi yegqwetha leSithili seNew York City, uyayiqonda intshukumisa. UNkosazana Friel, owayekongamela ukutshutshiswa ngendlela ye-SVU emsebenzini, wayedla ngokubukela umboniso kunye nentombi yakhe efunda kwisikolo samabanga aphakamileyo, ngoku eyi-18 kunye nomntu omtsha wasekholejini.
Eminye imiba ekusenokwenzeka ukuba bakha badibana nayo: isiqendu esibizwa ngokuba yiMvume, apho intombazana encinci ifakwa iziyobisi kwi-GHB; lo mtshato ukhankanywe ngasentla uEmily, apho umzalwana oselekhulile eceba ukwenza isithembiso esitsha sokuthimba nokudlwengula umfundi ophakamileyo emva koko asasaze iividiyo zokuhlukunyezwa kwakhe kwi-Intanethi; kunye noMzalwana, apho kubanjiswa ngesibambiso emva kokudlwengula abasetyhini abaliqela kunye nezivumelwano zabazalwana.
Kwakungafani nokuba ndiyibukele kunye naye xa wayeneminyaka engama-7, uNksz Friel watshela Umjongi . Kodwa xa ixesha lalilungile, xa emdala ngokwaneleyo kwaye xa ndicinga ukuba kufanelekile ukuqala ukujongana nale micimbi, yayiyenye indlela yokuvula incoko.
Igumbi lokutyela lababhali lityatyekwe ngalo Iposi iNew York kwaye Iindaba Zemihla ngemihla amaqweqwe angaphambili, anele ukucima iijusi zokuyila zomntu… okanye ukutya. Yonke Umthetho kunye noMyalelo isavenge sikhutshiwe sizihloko ezisentloko, kwaye ngamanye amaxesha umboniso ukhe ulondoloze iindaba. Ngexesha lokuhlala kukaMnu. Leight, umzekelo, i-SVU yayinesiqendu (ubuNtu boBuntu) malunga nomqeqeshi webhasikithi esebenzisa isisa sakhe njengomjelo wabantwana anokubaphatha gadalala. Umboniso wasasazwa kwiiveki ezimbini ngaphambi kokuba ibali likaJerry Sandusky liphume, uMnu Leight uqaphele, ngelizwi lokuzingca.
Njengoko uGothamist wabuza abafundi bakhe ngelo xesha, Hayi ukutsala ingqokelela yelenqe iyonke apha, kodwa eli bali elithile lesikali lihle kakhulu kwinqanaba 'lokungazifanelanga', awucingi?
Umnumzana Leight ucacisile ukuba umgca webali awusekelwanga kulo naluphi na ulwazi lwangaphakathi, kodwa ayisiyonto yenzekileyo, nokuba. SVU ineqela labacebisi ngodlwengulo, abasinde kulwaphulo-mthetho, abacuphi kunye nezinye iingcali zokunyanzeliswa komthetho abacebisa ababhali ngamanqaku ecebo. Ulwaphulo-mthetho ngokwesini sobudoda nendoda yinto nje esasixelelwa yona ngabantu ukuba iyenzeka, utshilo. Umboniso wawungazange uwuphumeze lo mbandela ngendlela ebaluleke kakhulu. Amaphepha:1 Mbini
Ngaba iHollywood iyakuze isivumele ukuba sisasaze iiNdawo eziNtsha zokubonelwa kweKhaya?
Iingxaki ezi-4 zoBudlelwane obuDala- kunye nendlela yokuzilungisa
Isebenza njani 'iNtetho yasimahla': Iqela leBhola yeBhola elahlekelwa ngabaxhasi ngaphezulu kweVidiyo ye-AOC
phezulu 10 iinketho kubathengi kubathengi
UJohnny depp abaphangi bomvuzo weCaribbean
I-nibiru izakubetha nini emhlabeni
ndinomona ngomfazi wesithandwa sam
Umbumbi omtsha weharry kunye nomdlalo bhanyabhanya womntwana oqalekisiweyo
Kuqala nini ukurhuqa kunye nokufa
ungajonga njani umntu ongasemva